မြန်မာနိုင်ငံကို အလယ်ပိုင်းကနေဖြတ်ပြီး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ စစ်တကောင်းမြို့ကနေ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့ကို ချိတ်ဆက်မယ့်လမ်း တစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ဖို့ ဘဂ်လားဒေရှ်နိုင်ငံက အဆိုပြုတာကို တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံလိုက် ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးဖို့ကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံက သဘောတူညီတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုတိယ-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားပါတယ်။
စစ်တကောင်း-ကူမင်း လမ်းသစ်ဟာ မူလက အဆိုပြုထားတဲ့ BCIM ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ်-အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာ စီးပွားရေး စကြ ၤန်လမ်းနဲ့ သီးခြားဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီလမ်းသစ် ဖောက်လုပ်ရေးကိစ္စကိုတော့ ဆွေးနွေးနေတုန်းပဲလို့ ဒက္ကားမြို့မှာ မနေ့က ကျင်းပတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးအဆင့်ဆွေးနွေးကျင်းပပြီးတဲ့နောက် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ပြောကြားလိုက်တာပါ။
လာမယ့်နှစ်မှာ ကျရောက်မယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ် သံတမန်ဆက်ဆံရေး အနှစ် ၄ဝ ပြည့်မြောက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွေမတိုင်ခင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Wang Yi ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို စနေနေ့က ရောက်ရှိနေပါတယ်။
ရခိုင်ပြဿနာ တရုတ် ကူညီဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တိုက်တွန်း
We should not allow this plan. No benefits for our country.It will be very dangerous to our country because we cannot control immigration issues effectively.
Don't get involve that plan.China want the exit route to India ocean for strategic reason,to support its navy in India ocean.Don't beapawn.
Jan 09, 2015 11:06 PM
For importing population from both countries
Dec 31, 2014 10:37 AM
If Burmese Military Government allows this plan, it is very dangerous for future. Be careful! Bengali proposed plan!
Dec 30, 2014 05:27 PM
“တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့ကို ချိတ်ဆက်မယ့်လမ်း တစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ဖို့ ဘဂ်လားဒေရှ်နိုင်ငံက အဆိုပြုတာကို တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံလိုက် ပါတယ်။”
ဟ.. မြန်မာနိုင်ငံ က သဘောတူ / မတူ ဆိုတာတောင် မမေးပဲ တရုတ်သဘောကိုကိုပဲ မေးလို့ကတော့ တရုတ်“ဘော”ပဲ ရမယ်ဟေ့။
Dec 30, 2014 04:26 PM